Genotropin ကလောင်, HGH ၏ activation နှင့်ရောစပ်သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
Genotropin ကလောင်, ကြီးထွားဟော်မုန်း၏ activation နှင့်ရောစပ်သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
HGH ထိုင်းနိုင်ငံက ဇန်နဝါရီလ 30, 2018
HGH Genotropin Pfizer ကနေအောကျဖျောပွထိုင်းနိုင်ငံ, ကြီးထွားဟော်မုန်း၏မူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုမှုအများဆုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့ရေပန်းစားသည် Genotropin ကလောင် goquick 36IU အထုပ်အကြောင်းအရာ Genotropin ၏ activation အပေါ်အသေးစိတ် step-by-ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်ပေးထားသည်:
အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်! ကလောင်အမည် activated ဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, ဘောပင်အပ်ထိပ်ကိုအတူဒေါင်လိုက်အနေအထားအတွက်ဖြစ်ရပါမည်
- အဆင်သင့်လုပ်ဆေးထိုးဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ HGH ကလောင်
မှတ်ချက် - တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်မပါဝင်ပါ, ကျနော်တို့ကိရိယာအစုံအတွက်တာဝန်ခံအခမဲ့ပေး
အပ်ကို set up Genotropin အပ် setting ကို,
Genotropin ခြံတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ကိုအသုံးပြုဖို့အဘို့အ Next ကိုကျနော်တို့တစ်ဦးဆေးထိုးအပ်ကို set up ရန်လိုအပ်ပါတယ်
bd အသေးစားဒဏ်ငွေ + 0.25 x ကို 5-8mm (29,30 သို့မဟုတ် 31, G)
Genotropin ကလောင် ကြီးထွားဟော်မုန်း Mixing
သင့်ရဲ့ဘယ်ဖက်လက်နှင့်အတူ Genotropin ကလောင်၏အထက်ပိုင်းယူအဆင်ပြေဒါဟာဖြစ်ပါသည်
ယခုငါတို့အထဲမှာက screwing, အပ်လက်ယာရစ်နှင့်အတူကြီးထွားဟော်မုန်း၏ကလောင်ဖွင့်ဖို့စတင်။ အနေအထားတခုကနေ task ကိုကို C နေရာချမှအဆုံးအနေအထား B ကနေတဆင့်ဖုကိုဖွင့်ဖို့ဖြစ်တယ်
သငျသညျ 12 မီလီဂရမ် (36 IU သည်) ဆေးထိုးဘို့ကြီးထွားဟော်မုန်းများအဆင်သင့်-to-အသုံးပြုမှုဖြေရှင်းချက်ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်
ကြီးထွားမှုဟော်မုန်း Genotropin ၏သောက်သုံးသော
ကြီးထွားဟော်မုန်း၏သောက်သုံးသော UI ကိုမှ MG
0.3 မီလီဂရမ် HGH 1 IU နဲ့ညီမျှသည်
0.6 မီလီဂရမ် HGH2IU နဲ့ညီမျှသည်
0.9 မီလီဂရမ် HGH စသည်တို့3IU နဲ့ညီမျှသည်
ရုံသောက်သုံးသော set အထိသို့မဟုတ်ဆင်းကိုမဆိုဦးတည်ချက်အတွက်ဘီးရွှေ့
ယခုအရာအားလုံးကြီးထွားဟော်မုန်းတစ်ခုထိုးလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်း, ဆေးထိုးဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်, နောက်တစ်နေ့အတွက်ဖတ်ပါ ဆောင်းပါး
Martin67 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2018